Tallaabooyin cusub oo lagula dagaallamayo cudurka Coronavirus ee Ankara | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTallaabooyin cusub oo lagula dagaallamayo Coronavirus ee Ankara
21 / 03 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, SAWIRADA, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Tallaabooyin cusub oo lagula dagaallamayo coronavirus ee dambiisha
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii waddaa dagaalka ay ka waddo Magaalada Caasimadda iyadoo qaadayso talaabooyin cusub oo looga hortagayo cudurka Coronavirus. In kasta oo Warshadda Halkeega Bread ay kor u qaaddo howlaha nadaafadda marka loo eego goobaha iibka, gaar ahaan aagga wax soo saarka, waxay ku fulisaa nidaamka sifeynta si xasaasi ah gawaarida gaadiidka dadweynaha, gaadiidka dadweynaha, gaadiidka dadweynaha, taxi iyo basas, iyo gawaarida adeegga C Plate. Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş wuxuu shaaca ka qaaday in Dowlada Hoose ee Magaaladu ay kala shaqeyn doonto ururada aan dowliga aheyn in loo qeybiyo cunnooyinka loogu talagalay xayawaanka darbi jiifka ah si loo daboolo baahida cunnada oo yaraaneysa xirnaanshaha kafateeriyada iyo makhaayadaha.
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii wadaysaa howlaheeda 7/24 iyada oo ay ku jirto la dagaalanka cudurada faafa ee ku baahsan dhammaan caasimada.
Sababtoo ah dillaaca coronavirus, dhammaan unugyada hoos yimaada isku-xirka Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka ayaa sare u qaadaya howlahooda nadaafadda unugyada waxayna sidoo kale fulinayaan tallaabooyin iyo tallaabooyin cusub.
MAMA KASOO BAADHI KARO CADAWGA
Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş ayaa shaaca ka qaaday inay bilaabeen inay qeybiyaan raashin iyagoo kaashanaya ururada aan dowliga aheyn ee Dowlada hoose ee Magaaladda iyagoo kaashanaya kafateeriyada iyo maqaayadaha buuxiya baahiyaha cunnada xoolaha xoolaha.
Xarunta xannaanada xoolaha ee Ankara ee Magaalada Ankara iyo Maareeyaha Xayawaanka Zoo Mustafa Mustafa Şener, kuwaas oo sheegay inay ku soo laabteen karantiil, halkaas oo muwaadiniinta soo laabatay lagu hayey Xerada Gölba where halkaas oo ay ku martigeliyeen xayawaan qalloocan oo ku yaal Xarunta Dowladda Hoose ee Gölbaşı shel, waxay bixiyeen macluumaad soo socda oo ku saabsan talaabooyinka la qaaday:
Miis xiisadeed waxaa lagu abuuray gudoomiye kuxigeenka Maamulka Ankara. Iyadoo la tixraacayo codsigii Xafiiska Badhasaabkeenna, waxaan u soo qaadnay 16 xayawaan qalfoof ah oo ku sugan aagga karantiil oo loogu talagalay hoygeenna xayawaanka annaga oo la kaashanayna degmada Gölbaşı iyo aqoonta mutadawiciinteena, si looga fogaado dhibaatooyin caafimaad, gaar ahaan nafaqada, maaddaama mutadawiciinteenu aysan geli karin bannaanka. Baadhitaanno caafimaad ayaa ay sameeyeen dhakhaatiirta xoolaheennu markii ugu horreysay ee ay xayawaankeennu yimaadeen. Lix ka mid ah 16-kii xayawaanka qalloocan ayaa la jeermis-galiyay. Waxaan la xiriirnay tabaruceyaal eegaya xayawaanka ku nool gobolka. Tabaruceyaashayada ayaa imaan kara wakhti kasta si ay u quudiyaan xayawaanka ku jira hoygeenna xannaanaynta oo ay u helaan macluumaad ku saabsan xaaladdooda caafimaad. Kadib marka karantiil laga saaro, xoolaheena waxaa lagu celin doonaa deegaanka laga soo qaatay. Xayawaanadeena xayawaanku waa inaysan ka walwalaan tan, xoolaheenna waxay ku sugan yihiin caafimaad wanaagsan mana jiraan wax dhibaato ah oo ku saabsan quudintooda. Waxaan sidoo kale bilownay inaan qaybino raashin. ”
Dabiiciga Jaamacadda Ankara Hacı Bayram Veli iyo Madaxweynaha Ilaalinta Xayawaanka ee Damla Karaboya ayaa yiri, "Kadib markii lagu dhawaaqay aaga karantiil, xoolihii aan quudinnay waxaa loo wareejiyay hoyga Gölbaşı. Markii hore, waxaan u dhowaannay si aqlabiyad ah, laakiin hadda waxaan ku arki karnaa saaxiibbadeena hoyga badbaadada ee Gölbaşı. Dhib malahan. In kasta oo culeyskoodu aad u wanaagsan yahay, caafimaadkooduna waa wanaagsan yahay, ”ayuu tabaruce xoolaha ka doorbiday Tenay Yücel,“ Waxaan imanayey hoygan sanado. Hoyga badbaadada, nolosha iyo cuntada nafta ayaa had iyo jeer jooga. Casiirkeeda ayaa si joogto ah loo beddelaa. Tallaallada waxaa loo sameeyaa si joogto ah, hannaanka jeermis-qaadista ayaa isla markaaba la sameeyaa. Ka dib markii Duqa Magaaladeena Mansur Yavaş uu xafiiska la wareegay, xaaladdu way ka fiicneyd. Kuwa aan halkan ku arkin waxay u hadlaan si kala duwan iyo si xun. Nafteennu waa nabad. Nolosheenu waa kuwo aad u caafimaad badan halkan. Cidina uma baahnid inay walwaasho.
DUGSIGA HALKU WAA HEES CUSUB EE HYGIENE LEVEL
Warshadda rootida rootida ee Ankara Halk ayaa sidoo kale kordhisay feejignaanteeda ka dhanka ah coronavirus ee ku jirta bakhaarada halkaas oo lagu soo saaro rootida iyo badeecada dubitaanka, gaar ahaan dukaannada tafaariiqda, rootida rootida Halk iyo baararka.
Warshadda rootida ee Halk, oo billowday Qorshaha Tallaabada Degdegga ah ee Tallaalka Ka-hortagga Dillaaca, waxay bilowday inay ku cabbirto qandho heerkulka jirka ee maalin kasta xilliyada qoritaanka dhammaan shaqaalaha. Halk Ekmek, oo kordhay tirada jeermiska jeermiska dila oo dhejisa boodhadhka digniinta meelaha la xiray, ayaa ku qasbay inay xirtaan maaskaro iyo galoofyada. Halk Ekmek, oo xirta kafateeriyada dukaamada Iibka, ayaa bilaabay inuu ku dabaqo sharciga 1 mitir ee ilaalinta masaafada bulshada ee iibka badeecada maalinlaha ah.
Isagoo sheegay in ay ahmiyadooda koowaad siinayaan caafimaadka guud iyo badbaadada cunnada, maamulaha guud ee shirkada Halk Ekmek Recep Mızrak wuxuu ku dhawaaqay inay qaateen tilaabooyin adag:
Waxaan diyaarinay 23 shay oo cabbir ah. Waxaan u abuurnay miis Musiibo oo Degdeg ah dabagalka codsiyada. Maaddaama xarumahayada wax soosaarka ay shaqeeyaan 3 wareeg, waxaan cabirnaa heerkulka jirka ee shaqaalaheena ka shaqeeya xilligaan waqtiga shaqada. Goobta nadaafadda, waxaan u soo qaadanay lagama maarmaanka u ah badeecada jeermiska dila, gacmo gashiga iyo maaskaro. Waxaan khadadka jaallaha ah u qabannay 1 mitir oo u dhexeysa hal mitir si aan u ilaalinno masaafada bulshada ee Dukaankeena lagu iibiyo. Sidan, waxaan isku dayeynaa inaan ilaalino fogaanta muwaadiniinteenna soo socota. ”
FARAX WUXUU KA JOOJIYO C-PLATE ADEEGYADA ADEEGA EE
Isagoo sheegay inay laba jibaarmeen howlaha nadaafadda iyo jeermiska ka hortagga cudurka loo yaqaan coronavirus laga bilaabo maalinta ugu horeysa iyadoo Magaalada Ankara ee Caasimaddeeda, Waaxda Arrimaha Caafimaadka Seyfettin Aslan ay sheegtay in gaadiidleyda dadweynaha ay ku dhacayaan howshan maalin walba.
Isagoo ku nuuxnuuxsaday inay sidoo kale jabayaan gawaarida adeegga taarikada ee 'C plate service' ka dib metrooga, ANKARAY, Cable Car, Basaska iyo tagaasida, Aslan wuxuu yidhi, "Waxaan sii wadaynaa nadiifinta iyo kahortaga jeermisyada dhammaan gaadiidleyda dadweynaha ee la isticmaalo 7/24. Waxaan la kulannay Gudoomiyaha Rugta Khibradayaasha ee Gawaarida Adeega Gawaarida Ankara waxaanan asaasnay ​​xarun. Intaas ka dib, markii dhammaan gawaarida adeegga saxan ee C ay yimaadaan xarunta, jeermis joogto ah ayaa la sameyn doonaa. Madaxa Waaxda Gaadiidka ayaa bixin doona shaqo isku dubbaridan arrintan. Magaala-weyn ahaan, waxaan isku dayeynaa inaan fulinno dadaalkeenna ku aaddan caafimaadka dadka 7/24 ”. Madaxa Waaxda Gaadiidka Dawladaha Hoose ee Magaalada Ankara Cali Cengiz Akkoyunlu ayaa hoosta ka xariiqay in gawaarida ganacsiga ee ka shaqeeya aagga mas'uuliyada ay ka saaran tahay Dowlada Hoose ay sii wadnaandoonto 7/24 oo uu yiri, "10 oo gawaarida ganacsiga ah, oo ay kujiraan basas iyo basas taariikhi ah, ayaa lagu sameeyay sifeynta. Marka la dhammeeyo hawsha ku-takri-falka ee qiyaastii 7 300 gawaarida adeegga ah, wadarta 17 kun oo gawaarida ganacsiga ah ayaa la nadiifin doonaa. ”
Tuncay Yılmaz, Gudoomiyaha Rugta Ganacsatada ee Howlwadayaasha Gawaarida Ankara, ayaa tilmaamay muhiimada daraasada baarista jeermiska ay sameeyeen Dowlada Hoose ee Magaalada wuxuuna yiri "Waxaan ku jirnaa qeyb had iyo jeer qaada shaqaalaha, shaqaalaha, iyo shaqaalaha rayidka ee magaalada waxanan ku jirnaa taraafikada aroortii iyo fiidkii. Qaabka looga takhaluso khatartan ayaa ah jeermis-dilis iyo nadiifin. Dareenkan, Dawlada Hoose ee Magaaladu waxay na siisaa 7/24. Aad baad u mahadsantahay. ” In kasta oo darawal adeegga adeegeeda platebrahim Aydirek uu uga mahadceliyay Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş, Fatih Yıldız wuxuu yiri, "Waxaan jeclaan lahayn inaan uga mahadcelinno Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara adeegyadeeda. Waxay ahayd shaqo nadiifin iyo buufin ay ahayd inay ahaato ”.
In kasta oo shaqooyinka nadiifinta ay gacanta ku hayaan kooxaha waaxda Booliiska, Orhan Taşcı, oo ka shaqeeya Xarunta Taksiga ee Madaarka ayaa yidhi, “Waxaan uga mahadcelineynaa Duqa Magaalada Ankara ee Magaalo Weynta taageeradooda. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka shaqeyno nadiifinta gawaaridayada. Waxaan arintaan la wadaageynaa rakaabkeena. Rakaabkeena ayaa isticmaali kara gawaaridayada si xasiloon. Hasan Hakan Tağluk, Gudoomiyaha Gudiga Esenboğa Taxis Motorized Carriers Iska, wuxuu yiri, “Waxaan ka faa'iideyneynaa codsigan anagoo gacan ka heleyna Degmadeena Magaalada. Waxaan ka helnaa ra'yi-celinno wanaagsan oo ku saabsan shaqada rakaabkeenna. Waxaan rabnaa inay daraasadahaani sii socdaan. Waxaan jeclaan lahayn inaan uga mahadcelinno Duqa Magaalada Mansur Yavaş taageeradooda. ”
Rıfat Çetinkaya wuxuu cadeeyay inay ku adeegayaan joogsiga Sincan Dolmuş wuxuuna yiri, “Dhamaan gawaaridayada waa la jaray. Waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo Degmadeena iyo Mudane Mansur Yavaş howlahooda. ”Darawalada basaska yar yar ee ka faa'iideystey adeegga ayaa yiri:
Niyazi Bilgiç: Waxaan jeclaan lahayn inaan uga mahadcelinno Madaxweynaheenna Mansur Yavas adeeggan ay degmadu siisay. Waxaan fileynaa sii wadida howlaha. ”
Feyzullah Kızıltaş: Aad iyo aad baad ugu mahadsantahay Degmadeena adeeggan.
Taburlu hadiyad: “Waad ku mahadsan tihiin degmadeenna sida aad u daryeeshay arrimahan. Waxaan sii wadnaa adeeggeenna hab caafimaad. ”
QAABILADA CUSUB EE KU SAABSAN
Dawladda Hoose ee Magaala-weyn, oo samaynaysa ku-takri-fal joogto ah dhinacyo badan oo ka kala socda hay'adaha dawladda iyo ururrada aan dawliga ahayn, ayaa qaaday tallaabooyinka soo socda ee ka hortagga khatarta faafa:
"Imtixaannada Dab-demiska" oo ay ku dhawaaqday Dawladda Hoose ee Magaalada 30-kii Maarso in lagu dhawaaqay in dalabka la aqbali doono oo la qaban doono inta u dhexeysa 13-17 Abriil, oo dib loo dhigay taariikh dambe.
Sababo la xiriira hoos u dhaca tirada rakaabka ganacsatada ee adeegsada Basaska Dadweynaha ee Gaarka loo leeyahay (PublicHO) iyo Gawaarida Gaadiidka Dadweynaha ee gaarka loo leeyahay (ELV) ee ka shaqeeya Ankara, liisanka socda iyo qiimaha qadarka ayaa dib loo dhigay muddo 2 bilood ah.
Laga soo bilaabo 4-kii Maarso 23, Dhismaha Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara, halkaas oo 2020 oo shaqaale ah, oo aan ahayn ruqsadaha maamulka, ay u adeegeen isla waajibaadka gudaha dhismaha EGO iyo ASKİ Xarunta Guud ee Agaasinka, iyada oo la fulinayo tallaabooyinka laga qaaday cudurka faafa ee coronavirus iyo Agaasimaha Guud ee Dawladda Hoose ee Magaaladda, EGO iyo ASKI si loo ilaaliyo caafimaadka shaqaalaha. wuxuu la shaqeyn doonaa nidaamka wareejinta illaa amar labaad si loo hubiyo in adeegga dadweynaha loo qabto iyada oo aan la carqaladayn.
Codsiyada caawimaada bulshada ee cusub ee degmada waxaa si kumeel gaar ah loogu sameyn doonaa taleefanka lala soo xiriiro ((0312) 322 45 47, (0312) 322 11 33 iyo (0312) 507 37 00) badalkeeda Xarunta Gargaarka Cuntada si looga hortago in dad badani sameystaan ​​ama fidiyaan fayraska.